GXT 540C Yula: misy gamepad an'ny Trust Gaming ankehitriny | Vaovao momba ny gadget
Eder Esteban | | Nampahery, an-trano
Ny safidin'ny gamepad amin'izao fotoana izao dia mitombo. Noho izany, ny fisafidianana gamepad izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao dia mety ho tototry ny karazany sy ny karazany, ny kalitao ary ny endriny. Trust Gaming dia iray amin'ireo marika manana ny fisiany lehibe indrindra amin'ity sehatry ny tsena ity ary mamela antsika gamepad vaovao ry zareo izao. Ity no fanontana GXT 540C Yula camo, izay miaraka amina tariby 3 metatra.
Ity fanontana GXT 540C Yula camo ity aseho ho fifehezana kalitao sy ny toetrany manokana Amidy amin'ny vidiny mirary izy io. Ankoatry ny maha maodely marobe azy, dia manana endrika ergonomika natao hanomezana fampiononana faratampony ho an'ny mpampiasa izy rehefa mampiasa azy.
Araka ny filazan'ny orinasa azy, ny GXT 540C Yula dia natao ho an'ny lalao filokana mahery sy lava, izay natao ho zava-misy bebe kokoa noho ny endriny mahafinaritra. Afaka milentika tanteraka amin'ny lalao mandritra ny ora maro ianao: ny endriny ergonomika sy ny firakotra fingotra dia manome antoka ny fihazonana mafy orina sy milamina amin'ny fotoana rehetra.
Ankoatr'izay dia gamepad iray izay manome safidy maro, satria tonga miaraka amin'ny bokotra 13 mitotaly, fifaliana roa analog, ary tontonana fanaraha-maso nomerika. Izany rehetra izany dia manampy amin'ny fanaovana an'ity maodely ity ho fitaovana tsara ho an'ny fotoana filalaovana lava. Miaraka amin'ny fiantohan'ny Trust Gaming amin'io lafiny io.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny GXT 540C Yula dia ny mifanentana amin'ireo karazana lalao rehetra. Satria tsy maninona izay lohateny lalaovinao na amin'ny fitaovana inona. Izy io dia aseho ho fitaovam-piadiana tonga lafatra amin'ny ady rehetra. Misaotra ny switch mivantana / X-input, afaka mandray anjara feno amin'ny lalao ianao. Ankafizo ny fanandramana fanaraha-maso fitifirana mora tohina amin'ny tsindry sy ny bokotra "soroka" analog amin'ny PlayStation 3. Afaka milalao amin'ny solosainao findainao sy ny PC anao ianao tsy mbola nisy toy izany.
GXT 540C Fanontana Yula camo Efa amidy amin'ny vidiny € 30,99. Raha te hahalala bebe kokoa momba ity gamepad ity sy ireo vokatra hafa an'ny marika dia azonao atao ny mitsidika ny tranokala ofisialiny, ato amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Nampahery » Fanontana GXT 540C Yula camo an'ny Trust Gaming: Ny gamepad be mpampiasa indrindra amin'ny tsena
Amazon Prime ho an'ny mpianatra, 3 volana maimaim-poana ary 18 euro isan-taona